‘पर्यटन व्यवसायलाई राहत प्याकेज कागजमै सीमित भयो, म दिक्क भएँ’ – Nepal Press
‘पर्यटन व्यवसायलाई राहत प्याकेज कागजमै सीमित भयो, म दिक्क भएँ’
२०७७ पुष २१ गते ९:४०
डा.धनन्जय रेग्मीको लागि नेपाल पर्यटन वोर्डको कार्यकारी निर्देशक (सिइओ) बन्ने समय भूतले खाजा खाने बेलाजस्तै पर्‍यो । भ्रमण वर्ष २०२० सफल पार्ने महत्वाकांक्षी योजना सहित दश जना प्रतिस्पर्धीलाई पछि पारेर सिइओ बनेका रेग्मी जिम्मेवारीमा आए लगत्तै विश्व कोभिड महामारीको चपेटामा परिहाल्यो ।
कोभिडले संसारको अर्थतन्त्र धाराशायी बनयो त्यसमा पनि पर्यटन त चौपटनै बन्यो । वर्षेनी १२ लाख पर्यटक नेपाल आउथे,अहिले त्यो संख्या सून्यमा छ र यो क्रम अझै केही समय कायम रहने निश्चित छ । रेग्मी धराशायी भएको पर्यटन उद्योगलाई उठाउने र आन्तरिक पर्यटन प्रबद्र्धन गर्ने योजनामा छन् तर सरकारको सहयोबिना सम्भव छैन ।
उनलाई नियुक्ति गर्ने पर्यटनमन्त्री योगेश भट्टराई सरकार छाडेर सडकमा पुगे पनि नयाँ पर्यटनमन्त्री भानुभक्त ढकालसँग रेग्मीका अपेक्षा धेरै छन् । योगेश र भानुभक्त एउटै पुस्ताका र एउटै राजनीतिक विरासत बोकेका नेता भएकाले पनि नयाँ पर्यटनमन्त्रीको साथ लिएर पर्यटन उद्योगलाई एकपटक फेरि माथि उठाउने उनको प्रयास देखिन्छ । प्रस्तुत छ,पर्यटन वोर्डका सिइओ रेग्मीसँग नेपाल प्रेसकी पवित्रा ढकालले गरेको कुराकानी नेपाल टकमा ।
कोभिड–१९ को महामारीका कारण पर्यटन क्षेत्रमा सबैभन्दा धेरै क्षति पुगेको अवस्था छ । यसको पुनरुत्थानका लागि पर्यटन बोर्डले अहिले के काम गरिरहेको छ ?
कोभिड–१९ का कारण पर्यटन व्यवसाय शून्यमा झरेको छ । शून्यमा झरेको पर्यटन व्यवसायलार्ई कसरी जोगाउने भन्ने कुरामा बोर्डको ध्यान केन्द्रित छ । अहिलेको अवस्थामा पर्यटन व्यवसायलार्ई जोगाउन हामीसँग कुनै पनि आधार छैन । यसलाई जोगाउने एक मात्र आधार भनेको नै सरकारी सहयोगको अपेक्षा गर्नु हो ।
कोभिडका कारण विदेशी पर्यटकको आगमन केही वर्ष नहुने निश्चित छ । त्यसैले अहिले नेपालको पर्यटन व्यवसायलाई जोगाउने हो भने आन्तरिक पर्यटन प्रवर्धन नै हो ।
पर्यटन व्यवसाय पुनरुत्थान गर्नका लागि ठूलो कोषको आवश्यकता छ । साथै सरकारले व्यवसायीलाई सहुलियत कर्जा उपलब्ध गराउनुपर्छ । पर्यटन व्यवसायीलार्ई सहुलियत कर्जादेखि लिएर कोषको स्थापना गर्ने कुरा सरकारले बारम्बार गर्दै आएको छ तर अहिलेसम्म कार्यान्वयन भएको छैन । कागजमा मात्र भएको आश्वासनले के गर्ने ? त्यसैले अहिले सरकारको आशा गर्ने अवस्था छैन । यसका लागि पर्यटन व्यवसायी नै एकजुट भएर अगाडि बढ्नुपर्नेछ । अहिले पर्यटन बोर्ड र निजी क्षेत्र मिलेर कसरी पर्यटन व्यवसायलाई उठाउन सकिन्छ भनेर विभिन्न कार्य गर्दै आएका छौं ।
सरकारले अहिले पनि धेरै पर्यटन व्यवसायलाई संचालन गर्न दिएको छैन । विदेशी पर्यटक आउनलाई पनि ती व्यवसाय संचालनमा आउनुपर्छ । व्यवसाय खोलेका म्यासेज गएपछि पो पर्यटक आउँछन् । व्यवसाय खोल्दै नखोलेपछि कसरी पर्यटक आउँछन् ?
यसैले अहिले हामीले पर्यटन व्यवसाय कसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ भनेर कार्यविधि बनाएर मन्त्रालयमार्फत मन्त्रिपरिषद्मा पठाएका छौं । यसमा र्‍याफ्टिङ कसरी गर्ने, हाई माउन्टेन लज कसरी चलाउने, रात्रिकालीन व्यवसाय कसरी संचालन गर्ने, स्पा कसरी चलाउनेलगायतका धरै कुरा यसमा छन् । त्यस्तै कोभिड–१९ को समयमा कसरी सुरक्षाका मापदण्ड अपनाएर ती व्यवसाय संचालन गर्न सकिन्छ भनेर सरकारलाई सुझाव पनि दिएका छौं ।
कोभिडका कारण विदेशी पर्यटकको आगमन केही वर्ष नहुने निश्चित छ । त्यसैले अहिले नेपालको पर्यटन व्यवसायलाई जोगाउने हो भने आन्तरिक पर्यटन प्रवर्धन नै हो । यसले पनि आन्तरिक पर्यटन प्रवर्धन गर्नुको विकल्प हामीसँग छैन । पर्यटन बोर्डले अहिले सबै ध्यान आन्तरिक पर्यटन प्रवर्धनमा नै लगाइरहेको छ ।
यसका लागि पर्यटन बोर्डले स्ट्रिट फेस्टिभल, विभिन्न ट्रिप, एकठाउँको पर्यटकलार्ई अर्को ठाउँमा भ्रमण गराउने तथा प्रचारप्रसारका काम गरिरहेको छ । अहिलेको हाम्रो जोड नै आन्तरिक पर्यटन बढाउने हो । यसका लागि नै पर्यटन बोर्ड व्यस्त छ ।
आन्तरिक पर्यटनलार्ई प्रवर्धन गर्ने कुरा गरिरहँदा कोरोना महामारी समाप्त भएको छैन । विज्ञहरू कोरोनाको नयाँ रूप आएको छ भन्छन् । आधा विश्व अहिले पनि लकडाउनमा छ । के यस्तो परिस्थितिका बीचमा आन्तरिक पर्यटक घुम्न बाहिर निस्केलान् ?
नेपालमा कोरोना महामारी सकिएको छैन यो सर्वविदित कुरा हो । तर, हामीले अहिले कोभिड–१९ का लागि अपनाउनुपर्ने सबै सुरक्षाका मापदण्ड अपनाएर बाहिर ढुक्कले निस्कन सक्छौं । शहर–गाउँ अहिले पनि कहाँ बन्द छ र ? आन्तरिक पर्यटन प्रवर्धनका लागि अहिले पनि पर्यटन बोर्डका पदाधिकारी विभिन्न ठाउँमा घुमिरहेका छौं । सुरक्षाको खतरा कहीं पनि छैन । तर, सुरक्षामा अपनाउनुपर्ने सबै प्रोटोकल अपनाउनुपर्‍यो । सबै ठाउँमा सुरक्षाका मापदण्ड अपनाएर होटल तथा रेस्टुरेन्ट खुलेका छन् ।
वास्तवमा देश घुम्न चाहनेका लागि यो सबैभन्दा उत्तम समय हो । किनभने अहिले पर्यटक स्थलहरू पहिलाको जस्तो भीडभाडयुक्त छैनन् । आनन्दले घुम्न सक्नुहुन्छ । त्यस्तै; होटल, रेस्टुराहरूले दिने सुविधा आधा सस्तो भएको छ । जहाज तथा सवारी साधनको टिकट पनि सस्तोे छ । यो वेलामा नघुमे कहिले घुम्ने ? आनन्दले बाहिर निस्कनुहोस् र देश घुम्नुहोस् । परिवारसँग घुम्ने यो उपयुक्त समय हो ।
नेपालमा आन्तरिक पर्यटकको संख्या कम छैन । किनभने विगतका दिनमा नेपाल बाहिर गएर घुम्नेको संख्या १२ लाखको हाराहारीमा रहेको देखिन्छ । त्यस्तै १२ लाखकै हाराहारीमा विदेशी पर्यटक आएका थिए । यो बाहिर गएर घुम्ने पर्यटकलार्ई आन्तरिक रूपमा घुमाउन सकियो भने पनि अहिलेको परिस्थितिमा पर्यटन व्यवसायलाई माथि उठाउन सकिन्छ ।
धरासायी बनेको पर्यटन व्यवसायलार्ई पुनरुत्थान गर्न सरकारबाट कस्तो सहयोग पाइरहनुभएको छ ?
वास्तवमा भन्नुहुन्छ भने सरकारले अहिले केही सहयोग गरेको छैन । किनभने सबैभन्दा धेरै विदेशी मुद्रा आर्जन गर्नेमा पर्यटन व्यवसाय दोस्रो स्थानमा रहेको छ । तर आज पर्यटन व्यवसाय नै उठ्नै नसक्ने गरी पछारिएको छ । यसलार्ई जसरी भए पनि उठाउनु छ । अत्यन्त दयनीय अवस्थामा गुज्रिएको पर्यटन उद्योगलार्ई सरकारले छुट्टै राहतको प्याकेज ल्याउनुपर्ने हो । खोइ राहत प्याकेज ?
राष्ट्र बैंकले ५ प्रतिशतमा पर्यटन व्यवसायीलार्ई दिने भनेको ऋण अझै दिएको छैन । व्यवसाय ठप्प भएको नौ महिना भइसक्यो अहिले पनि व्यवसायी महँगो व्याज तिर्न बाध्य छन् ।
विदेशी पर्यटक नआउँदासम्म व्यवसायीले कसरी पर्यटन व्यवसाय धान्छन् भन्ने सरकारलार्ई कुनै चिन्ता छैन । कैयौंको रोजगारी गुमेको छ । त्यसले लाखौंलार्ई असर परेको छ । पर्यटन क्षेत्रका दक्ष व्यवसायी तथा कामदार पलायन भएका छन् । अहिले पर्यटन व्यवसायीलाई वास्तवमा सरकार छ कि छैन भन्ने नै द्विविधा छ ।
सरकारको बुझाइ निजी क्षेत्रबाट कर उठाउने भन्ने मात्र छ । निजी क्षेत्रका समस्यासँग सरकार परिचित छैन । पर्यटन क्षेत्रले मात्र वर्षमा ७७ अर्ब विदेशी मुद्रा आर्जन गर्छ । यसको पुनरुत्थानका लागि सरकारले अहिले ५० अर्ब खर्च गर्न सक्दैन ?
निजी क्षेत्रले दुःख गरेर पर्यटन व्यवसायलार्ई यहाँसम्म ल्याए । सरकारले पर्यटन क्षेत्रबाट लिइरहेको छ तर, दिने चाहिं काम गर्दैन । सरकारले यसरी नै पर्यटन क्षेत्रलार्ई बेवास्ता गर्ने हो भने चाँडै नै पर्यटन व्यवसायीले आन्दोलन गर्नुको विकल्प छैन ।
वर्षमा अर्बौं विदेशी रुपैयाँ भित्र्याउने पर्यटन क्षेत्रकै विकासका लागि चाहिं सरकारले कसरी खर्च गरेको छ ?
सरकारले पैसा त खर्च गर्छ तर त्यो पैसा खर्च कहाँ भइरहेको छ भन्ने हो । पर्यटन क्षेत्रमा हेर्नुहुन्छ भने अहिले जथाभावी रूपमा पैसा खर्च गरिएको छ । उपलब्धि हुने ठाउँमा सरकारले एक पैसा पनि खर्च गरेको छैन ।
हेर्नुस् ग्रेटर हिमालयनको नाममा अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी खर्च भएको छ । यहाँ भएको खर्चको लेखाजोखा छैन । ग्रेटर हिमालयनमा गरेको त्यत्रो खर्चले के उपलब्धि दियो ? एक अर्ब भएको भए त नयाँ गन्तव्य सृजना हुन्थ्यो ।
तर, हामीसँग अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा बेच्ने कुरा ६०/७० वर्ष अघिकै त्यही एउटा हिमाल र लुम्बिनी, चितवन, पोखरालगायतका क्षेत्र छन् । यी एउटै ठाउँको विश्वसामु कतिपटक प्रचार गर्ने ? अब नयाँ गन्तव्य खोज्नु पर्दैन ? हामीसँग त पर्यटकीय सम्भावना बोकेका कैयौं नयाँ ठाउँ छन्, खै ती गन्तव्य खोजेको ? नेपालमा साँच्चै बेच्नुपर्ने र आजसम्म नबेचेको कुरा नेपालको सांस्कृतिक, प्राकृतिक विविधता हो ।
सरकारको अहिलेको काम भनेको एउटा गाउँमा सानो मन्दिर बनाउने । पाटी, पौवामा खर्च गर्ने, साना पुलपुलेसा बनाउने काममा खर्च गर्ने । यस्तो परिपाटीले पर्यटनको विकास हुन्छ ? वास्तवमा यहाँ टुरिजम प्रोडक्ट भनेको के हो भन्ने नै धेरै मानिसले बुझेकै छैनन् ।
यो वर्षबाट हामीले स्पष्ट भिजन बोकेर अगाडि बढेका छौं । कुन ठाउँमा के विकास गर्ने भन्ने कुरामा हामी प्रष्ट छौं । अहिले हामीले हिल स्टेशनलाई ‘ल्यान्डिङ पुलिङ’ गर्ने काम गरेका छौं । पर्यटकीय गन्तव्यहरूका सडक, बाटाघाटा, पुलपुलेसा, पानी बिजुली आदि सरकारले बनाउने र यसमा निजी क्षेत्रले लगानी गर्ने वातावरण बनाउँदैछौैं । हामीले अहिलेसम्म पर्यटन विकासका लागि भिजनमा काम गरेका छैनाैं । जुनचाहिं अहिलेको सबैभन्दा कमजोरी पक्ष हो । हामी भिजन लिएर अगाडि बढेका छौं ।
अर्को कुरा पनि सुन्नुहोस् । सरकारले भिजन बनाएर खर्च गरेकै छैन । जहाँ मन लाग्यो त्यहाँ खर्च गरिन्छ । भिजनमा काम नै हुँदैन । यहाँ अर्को पनि समस्या छ । पर्यटन बोर्डले भिजन बनाउला तर, मन्त्रालयमा महिना–महिना दिनमा पदाधिकारी परिवर्तन हुन्छन् । महिना–महिनामा फेरिने कर्मचारीबाट के काम हुन सक्छ ?
म बोर्डमा आएपछि नै दुई जना सचिव फेरिइसके । अहिले मन्त्रालयमा तीन महिना पुरानो सह–सचिव छन् । यस्तो अवस्थामा कसरी काम गर्न सकिन्छ । म त दिक्क पनि भइसकें । एउटालाई बुझायो, फेरि अर्कोलाई बुझायो । बुझाउँदा बुझाउँदै समय गइसक्छ । अनि हामीले बनाएको भिजनमा कहिले काम हुन्छ ?
केही समय अगाडि पर्यटन व्यवसायमा आवद्ध मजदूरहरूले विभिन्न माग राखेर पर्यटन बोर्डमा पत्र बुझाएका थिए । वास्तवमा के थिए मजदूरका माग र बोर्डले कसरी सम्बोधन गर्‍यो त्यसलाई ?
वास्तवमा पर्यटन बोर्ड मजदूरहरूको समस्या समाधान गर्ने संस्था होइन । तर, हिमाली क्षेत्रका पदयात्राहरूमा जाने मजदूरहरू बारम्बार दुर्घटनामा पर्ने, बिरामी हुने तथा उद्धार गर्नलाई समस्या हुने भएकाले त्यस्ता खालका जोखिमहरूलाई न्यूनीकरण गर्नका लागि ‘टीम’ कोषको स्थापना गरेका थियौं । त्यो कोषमा विदेशी पर्यटकबाट उठाएको एक हजार रुपैयाँबाट १० प्रतिशत रकम कोषमा जम्मा गर्ने गरिएको थियो । हाल त्यो कोषमा पाँच करोड रुपैयाँ जम्मा भएको छ । मजदूरले त्यो पैसा हिनामिना भयो भन्ने सोचे । र, त्यो पैसा अहिले नै मजदूरका लागि खर्च गर्नुपर्छ भने । त्यति पैसाले उनीहरूको समस्या समाधान हँुदैन । तर, उनीहरूको मागलाई बोर्डले कार्यविधि बनाएर सम्बन्धित निकायमा लगिसकेका छौं । चाँडै नै उनीहरूका समस्या समाधान हुन्छन् ।
कोभिड–१९ को समयमा अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा नेपालको पर्यटन क्षेत्रको प्रचार–प्रसार तथा प्रवर्धन कसरी भइरहेको छ ?
अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा अहिले सशरीर उपस्थित भएर प्रचार–प्रसार गर्ने अवस्था छैन । तर, पर्यटन बोर्डले डिजिटल प्रविधिबाट विश्वका विभिन्न क्षेत्रमा जनाउनुपर्ने उपस्थिति र प्रचार–प्रसारको कामलार्ई रोकेको छैन । जूम तथा सोसल मिडियाका सबै माध्यम प्रयोग गरेका छौं । भर्खरै पनि हामीले वी च्याट, टिकटक, फेसबुक, यूट्यूबलगायतका माध्यमबाट विश्वमा प्रचार–प्रसार गरेका छाैं ।
४० वर्ष भइसक्यो लुम्बिनी विकास गर्छौं भनेर मास्टर प्लान बनाएर अघि बढेको । अझैसम्म लुम्बिनी विकास गरिसकेका छैनाैं । आज यता खनेको छ, भोलि उता खनेको छ । के बेच्ने हामीले धूलो र माटो ?
अब नेपालले बेच्ने भनेको मध्यपहाडी क्षेत्र हो । यहाँका ठाउँहरूको पहिचान गरी प्रचार–प्रसार गरेर पर्यटक भित्र्याउनुपर्छ । अहिले पर्यटन बोर्डको ध्यान पनि मध्यपहाडी क्षेत्रको भू–भागमा रहेका नयाँ गन्तव्यहरूमा नै छ ।
तर, ती सम्भावना बोकेका ठाउँहरूमा पूर्वाधार निर्माण भएकै छैन । गन्तव्य खोज्ने र पूर्वधार निर्माण गर्ने कार्य पर्यटन बोर्डको होइन । यो त सरकारको दायित्व हो । यदि सरकारले काम गर्न सक्दैन भने हामीलाई देओस् न बोर्डले गर्छ यी काम । हामी बनाउन तयार छौं ।
अर्कोतिर ४० वर्ष भइसक्यो लुम्बिनी विकास गर्छौं भनेर मास्टर प्लान बनाएर अघि बढेको । अझैसम्म लुम्बिनी विकास गरिसकेका छैनाैं । आज यता खनेको छ, भोलि उता खनेको छ । के बेच्ने हामीले धूलो र माटो ?
भारतमा गयो नेपालको बारेमा खूब प्रचार-प्रसार गर्‍यो । नेपाल एकदम सुरक्षित छ घुम्न आऊ भन्यो । भारतीय पर्यटक बोकेर आएको गाडी नेपाल छिर्नासाथ पचास ठाउँमा रोकेर सोधेर हैरान बनाउँछन् । अनि कसरी आउँछन् उनीहरू । यस्तो पाराले पर्यटन व्यवसाय फस्टाउँछ ? अहिले मानिसले के हेर्न खोजेका छन्, ती चिजहरूलाई कसरी प्रस्तुत गर्ने भन्ने कुरा थाहा पाउनुपर्छ ।
पर्यटन विकासका लागि एउटा लक्ष्य लिएर अगाडि बढ्नुपर्छ । तर, नेपालमा जे मन लाग्यो त्यही गर्ने परिपाटी छ । यस्तो भद्रगोल स्थितिले अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा के बेच्नु हामीले ? यस्तो पाराले पर्यटन विकास हुँदैन भनेर अहिले हामीले नेपालको पर्यटनलाई सही दिशा दिने कोशिश गरेका छौं ।
कोरोनाका कारण भौतिक रूपमा हामी विदेश जानु परेको छैन । यही बेलामा पर्यटन क्षेत्रको विकासमा लागेका छौं । त्यही अनुरूप काम गरिरहेका छौं । मैले अघि पनि भनिसकें अबको नेपालको मूल पहिचान नै मध्यपहाडी भूभागका गन्तव्य हुन् । यी चिजको पहिचान गरेर सरकारले पूर्वाधार निर्माण गरोस्, अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा हामी त्यही बेच्छौं । बेच्ने र प्रचार–प्रसार गर्ने काम पर्यटन बोर्डको हो ।
अहिले पर्यटन बोर्डको मुख्य चुनौती के हो ?
अहिले पर्यटन बोर्डको मात्र होइन पर्यटन व्यवसायकै सबैभन्दा ठूलो चुनौती नै नाजुक भएको व्यवसायलाई कसरी पुनरुत्थान गर्ने भन्ने हो ।
हिजोसम्म नेपालमा १२ लाख विदेशी पर्यटक आएकोमा अहिले त्यो संख्या शून्यमा झरेको छ । यसलाई पहिलाको अवस्थामा पुर्‍याउने भन्ने नै हो । चलिरहेको व्यवसायलाई माथि लैजान कठिन छैन तर, धरासायी बनेको व्यवसायलाई माथि पुर्‍याउन निकै कठिन हुन्छ । अर्को चुनौती भनेको संसारभर अहिले सबैले पर्यटक खोजिरहेका छन् ।
त्यो बजारमा प्रतिस्पर्धा गरेर अरूको भन्दा हाम्रो गन्तव्य हाम्रो छ भनेर पर्यटक बोलाउनु छ । हिजो पर्यटन क्षेत्र मजबूत थियो आज एक रुपैयाँ पनि छैन । पर्यटनमा भएका दक्ष जनशक्ति पलायन भएका छन् । हिजो हामीसँगै काम गरेका गाइडसाथीहरू आज पेन्टरको काम गरिरहेका छन् । हामीले दक्ष जनशक्ति गुमाइरहेका छौं । यस्तो अवस्थामा बोर्डमाथि ठूलो चुनौती थपिएको छ । यो चुनौतीलाई चिर्न हाम्रो मात्र कार्यले हुँदैन यसमा पर्यटन मन्त्रालय, सरकारको नीति, मन्त्रालयका सचिव, बोर्डका सीईओ तथा निजी व्यवसायीले मिलेर अगाडि बढ्नुपर्छ ।
एउटा पर्यटन मन्त्री भएको बेलामा आएर अर्को पर्यटन मन्त्रीसँग काम गर्नुपर्दा तपाईंलाई आगामी दिन कत्तिको सजिलो होला ?
अहिले नयाँ मन्त्री आउनुभएको छ । उहाँसँग काम गर्न समस्या होला जस्तो मलाई लाग्दैन । बोर्डले के काम गरिरहेको छ त्यसका बारेमा मन्त्रीज्यूलाई जानकारी दिइसकेको छु । उहाँले पनि राम्रो ढंगले ती कुरालाई मनन् गर्नुभएको छ । पर्यटन क्षेत्रलाई अगाडि बढाउन आफूले सकेको काम गर्ने बताउनुभएको छ । यसले असहज स्थिति पैदा नहोला ।
नेपाल पर्यटन बोर्डका पदाधिकारीलाई बारम्बार पैसाको अनियमितता गरेको आरोप लागिरहन्छ । यसमा तपाईंको धारणा के छ ?
पर्यटन बोर्डमा भएको भ्रष्टाचारको बारेमा मैले पनि सुनेको छु । म आउने वित्तिकै पनि अनियमितताको बारेमा मलाई जानकारी गराइएको थियो । म पारदर्शितामा विश्वास गर्छु । यो संस्था पनि पारदर्शी हुनुपर्छ भनेर तीन वर्षदेखि रोकिएको आन्तरिक लेखा परीक्षण गराएँ । तीन वर्षदेखि बोर्डको आन्तरिक लेखा परीक्षण भएको रहेनछ । बोर्डको आन्तरिक लेखा परीक्षण गरेर महालेखा परीक्षक (मलेप) लाई बोर्डमा बोलाएको सात महिना भइसक्यो अझैसम्म आएको छैन ।
आन्तरिक परीक्षक नभएकाले बोर्डमा भ्रष्टाचार भयो भन्ने कुरा होला । तर, यो प्रमाणित हुनुपर्‍यो नि ! मलेप आएर त्यसको निरीक्षण गर्नुपर्‍यो । कोही त्यसमा दोषी ठहरिए ती व्यक्तिलाई कारबाही हुनुपर्‍यो । त्यसै संस्थालाई बद्नाम गर्नु भएन नि !
#नेपाल पर्यटन बाेर्ड
प्रकाशित: २०७७ पुष २१ गते ९:४०
७० लाखको लगानीमा वीरेन्द्रनगरमा ड्रागन खेती, बेर्ना पनि पाइने
अर्थमन्त्री रावललाई आफ्नै सांसदबाट बजेट परिष्कृत गर्न दबाब
अपर अरुणमा भोजपुरबाट २५ अर्बको लगानी प्रतिबद्धतासहित ऊर्जामन्त्रीको ध्यानाकर्षण
भारतले पेट्रोलियम निर्यातमा लगायो कर, नेपालमा कस्तो पर्छ असर ?
नेपालले भारतलाई बेच्यो एक महिनामा १ अर्ब ७२ करोडको बिजुली
सरकारलाई सिबिफिनको आग्रहः अर्थतन्त्र बिग्रिँदै गयो, सुधारौं
नबिल बैंकमा ज्ञानेन्द्र ढुंगानाले सम्हाले सीईओकाे जिम्मेवारी